Fetin'ny mozika :: Hasongadina etsy Andavamamba ireo gadona manerana ny Nosy • AoRaha
Fetin’ny mozika Hasongadina etsy Andavamamba ireo gadona manerana ny Nosy
Tsy diso anjara amin’ny fankalazana ny fetin’ny Mozika isika eto Madagasikara, ka hampiantrano azy indray ny Alliance Française Andavamamba. Roa andro no hanamarihana izany amin’ny 21 sy 22 jona ho avy izao, miaraka amin’ny mozika samihafa sy ireo mpanakanto maro.
« Hatambatra sehatra iray ny fahasamihafana hoentina hanehoana ny tena fihavanana », raha ny voalazan’ny mpanakanto iray handray anjara amin’ity seho ity.
Hanomezana vahana manokana ny andro voalohany ny mozika an-tanàn-dehibe, miaraka amin’i Dougl, Jimmy B Zaoto, Olo Blaky ary Rain’Ve. Ny sabotsy no tena fety goavana satria hisy sehatra telo no hiara-hanentana ny tolakandro manontolo. Ho hita mandritra izany ny vakodrazana avy amin’ireo faritra maro manerana ny Nosy.
Mpanakanto manana ny lazany maro no handray anjara, ka isan’izany ny tarika Salala, Lego, Bagzana, Sarandra Beloba, Tony Za, Bakomanga, Randria Ernest zanany, Raozin’i Gasikara, Voromanga Milalao, Rixon, Sasamaso, Alina, Lokomotiva. Maimaim-poana avokoa ny seho rehetra.
Famoahana rakikira :: Hampahafantatra ny “Gasikara” i Fara Gloum
Sary sy hosodoko